Building Yuxam, Fanorenana 63 - Seoul
Adiresy: 50 63-ro, Yeoeuido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Atsimo
Tel: +82 2-789-5663
Haavo: 249 m
Haavo hozatra: 274 m
Datin'ny fanokafana: 30 septambra 1985.
Ao Seoul, ao amin'ny nosy Yeoydo dia ilay trano malaza Yuxam Building, izay antsoina koa hoe (Building Building 63). Ity no karatra fitsangatsanganana ao an-drenivohitra, mampiseho ny haitao sy ny herin'ny fandraharahana eto amin'ny firenena.
Nahazo ny anarany avy amin'ny isa ny takelaka, satria mitovy amin'ny Yuksam ny isa 63 amin'ny fiteny Koreana. Ny fanorenana ny mari-pamantarana dia nanomboka tamin'ny Febroary 1980, ary vita tao anatin'ny dimy taona. Ny fanokafana ofisialy dia ny 30 septambra 1985.
Noraisin'ireo solontenam-panjakana manerana izao tontolo izao ny hetsika, satria tamin'izany fotoana izany no toerana avo indrindra amin'ny kaontinanta. Amin'izao fotoana izao, ny tilikambo dia manana ny laharana fahatelo any Korea Atsimo . Ny tranoben'i Yuxam dia miorina eo afovoan'ny nosy ary manakatra ny Reniranon'i Han. Ambonin'ny tany dia misy 60 ihany ny rihana, ny farany dia mahatratra 249 m. Ny haavon'ny haavon'ny trano miaraka amin'ny spire dia 274 m.
Ny rafitra dia manana endrika tsy mahazatra ary naorina araka ny endriky ny tsy fisian'ny parallelepiped (mitombo ny tilikambo). Ho an'ny famirapiratana tsy mahazatra dia antsoina hoe volamena ihany koa ny trano fandraisam-bahiny. Indrindra indrindra fa ny trano dia mandroso amin'ny filentehan'ny masoandro, ny maraina ary ny jiro amin'ny alina. Ity vokatra ity dia nahazo ny daba, noforonina manokana ho an'ny trano Yuksam.
Inona no ao amin'ilay rafitra?
Ao amin'ireo efi-trano telo voalohany, etsy ambanin'ny tany, dia:
toeram-pivarotana 100, antsoina hoe arena;
Imax cinema - 25 metatra ny haavony ary heverina ho lehibe indrindra eto an-tany;
Alquiler-oceanarium malaza 63 Sea World.
Misy mponina maherin'ny 200 ao amin'ny moron-dranomasina. Ny mpitsidika matetika dia voasariky ny piranhas, penguins, voay, ratra elektrika, akora moraly, oarfish, lôtetra ary karazana tahirin-trondro misy trondro. Ny faritra manontolo amin'ny akquarium dia 3563.6 metatra toradroa. m. Mizarazara ho faritra mitoka-monina izy ireo, izay maneho ny ampahany samihafa eto amin'izao tontolo izao - avy amin'ny sisin-tsambo avaratra mankany amin'ny tropika ivelany.
Ao amin'ny ety ambany ny tranon'ny Yuksam dia:
toerana misy orinasa lehibe sy banky ao Seoul;
Toeram-pisakafoanana, fanta-daza amin'ny sakafo mahasalama sy ny fahitana azy tsara;
tranombakoka iray ahafantarana ny sarin'ireo karazan'olona mahafinaritra, olo-malaza sy olo-malaza.
Fiantsoana any amin'ny trano fandraisam-bahiny
Ny trano dia manana haingam-pandeha ambony avo 6 metatra mirefy 54 metatra. Ity no fanamorana haingana indrindra ho an'ny olon-tsotra. Izy dia manangona mpitsidika ny departemanta fitobiana, eo amin'ny 63 am-polo. Avy amin'ny fahafahan'ity fitaterana ity dia nahazo sofina sy adrenalinina ny habaka, satria vita amin'ny glasa ny kabine ary midina any an-danitra ao anatin'ny latsaky ny 5 segondra.
Any an-tampony, ireo mpizahatany dia hanana fomba fijery mahafinaritra ahitana an'i Seoul, sy amin'ny toetr'andro mazava - ary eo amoron-dranomasin'i Incheon . Mbola eto ny tranombakoka any an-danitra, izay ivontoerana ara-kolontsaina misy saripika sary. Miala amin'ny rihana B1 ny ascenseur.
Azonao atao ny manamarina ny trano famakiam-bary Yaksam mandritra ny fitsidihana an -tsehatra ny renivohitra na ny anao manokana. Ny fidirana ao amin'ilay trano sy ny deck observation dia afaka. Ny saram-pitsaboana dia tsy ilaina afa-tsy ho an'ny tapakila any amin'ny aquarium sy ny tranombakoka . Raha mandoa vola amin'ny karatra fitakiana ianao dia mahazo fihenam-bidy tsara.
Ahoana no hahatongavana any amin'ny tranobe toeram-piofanana Yuxam ao Seoul?
Tsara kokoa ny mankany amin'ny tilikambo amin'ny metro metro 5. Ny fiantsonana dia atao hoe Yeouinaru, fivoahana # 4. Avy eto dia mila mandeha amin'ny 20 minitra ianao. Mialà amin'ity toerana ity fa tsy azonao atao fotsiny, satria azo jerena avy amin'ny teboka rehetra ao amin'ilay nosy, ary avy amin'ny reniranon'i Khangan.
Tanànan'ny Lotte Lotte
Fifaninanana mahatsikaiky ho an'ny taonan'ny olon-dehibe
Giovanni Dresses 2014
Cork eo amin'ny tany
Ny fanasitranana ny voambolana
Ahoana no hambolena petunia amin'ny zana-ketsa?
Sakamalao vita amin'ny embroidery - karazana sary avy amin'ny finday tsara tarehy sy mahazatra indrindra
Azu ao amin'ny multivariate
Sakafo mamy avy amin'ny courgettes
Trondro Dorado - toetra mahasoa
Fitiavan'i Provence eo afovoan'ny efitrano fandraisam-bahiny - hevitra momba ny lamaody amin'ny famolavolana
Modely kiraro - Herinandro 2014
Rachel McAdams sy Selma Blair dia nitantara tantara mampihetsi-po momba ny fanorisorenana nataon'ny tale James Toback
Ny tsy fahampian-tsakaiza
Ny aretin'i Crohn - fiainana mialoha
Bibilava ho an'ny alika
Fashion ho an'ny vehivavy feno 2014